आज बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य ! हेर्नुस् कति पुग्यो तोलाको – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/आज बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य ! हेर्नुस् कति पुग्यो तोलाको
आज बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य ! हेर्नुस् कति पुग्यो तोलाको
नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्य ३ सयले बढेको छ । आज सुन तोलामा ७१ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार सुन ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
महासंघका अनुसार तेजावी सुन पनि ३ सयले बढेको छ। बजारमा तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा ७१ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, चाँदी तोलामा ८ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार चाँदी तोलमा ८ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
नुवाकोटको साततले दरबार
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटनमन्त्री भट्टराईको आकस्मिक छड्के
नेपाल आइडलको सिजन ‘थ्री’ टप ५ बाट आउट भए नेसन पुन मगर